रोनाल्डोसँग खेल्ने नेयमारको चाहना! | Hamro Khelkud
रोनाल्डोसँग खेल्ने नेयमारको चाहना!
एजेन्सी – फ्रान्सेली क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी) का ब्राजिलियन सुपरस्टार फरवार्ड नेयमारले पोर्चुगिज फरवार्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डोसँग सँगै खेल्ने चाहना रहेको बताएका छन् ।
नेयमारले आफ्नो राय परिवर्तन गर्नु कुनै अपरिचित होइन । यि ब्राजिलियनले फेरि एकपटक त्यस्तै गरेका छन् । पीएसजीमा चौथो सिजन खेलिरहेका नेयमारले धेरैपटक क्याटलान क्लब बार्सिलोनाका अर्जेन्टिनी खेलाडी लियोनेल मेस्सीसँग खेल्ने चाहना रहेको बताइरहँदा पछिल्लोपटक इटालियन क्लब युभेन्टसका पोर्चुगिज फरवार्ड रोनाल्डोसँग खेल्ने चाहना व्यक्त गरेका छन् ।
रोनाल्डोको युभेन्टस बसाई शंकास्पद बनिरहेको छ । यो सिजन युभेन्टस सिरी ‘ए’ को पाँचौ स्थानमा रहँदा अर्काे सिजनको च्याम्पियन्स लिगको लागि स्थान बनाउन संघर्ष गरिरहेको छ । च्याम्पियन्स लिगमा छनोट हुन नसके रोनाल्डोले युभेन्टस छाड्न सक्नेछ ।
‘म रोनाल्डोसँग खेल्न चहान्छु ।’ नेयमारले जि क्यु फ्रान्सलाई भने, ‘मैले यस अवधिमा धेरै स्टार खेलाडीसँग खेले । मेस्सी र एमबाप्पे उदाहारण हुन् । तर मैले रोनाल्डोसँग सँगै खेल्न पाएको छैन । उनीसँग खेल्ने मेरो चाहना छ ।’ तर, यो सम्भावना न्युन छ । नेयमारले चाहेर मात्रै हुनेछैन । क्लबले पनि उनलाई अनुबन्ध गर्नुपर्दछ ।
नेयमारको यो मात्रै उनको लक्ष्य होइन । यि पीएसजी स्टार नेयमारले ब्राजिलबाट विश्वकप जित्ने चाहना रहेको समेत बताएका छन् । ‘म विश्वकप जित्न चाहन्छु ।’ नेयमारले भने, ‘यो मेरो ठुलो सपना हो । तर म पीएसजीबाट पनि हरेक उपाधि जित्न चहान्छु ।’ ‘म ३० वर्षको पुगिसकेको छु । म आफ्नो फर्ममा छु ।
नेयमारले यसै साता पीएसजीसँग नयाँ सम्झौता नविकरण गरेपछि बार्सिलोनाले उनलाई पुन अनुबन्ध गर्ने सपना सकिएको छ । नेयमार सन् २०१७ मा विश्व कीर्तिमानी मुल्य १९८ मिलियन पाउन्डमा बार्सिलोनाबाट पीएसजी आएका थिए ।